နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံများ မြှင့်တင်ရေး စီမံ ချက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် လဲလှယ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် ချီးမြှင့် - ရပ်ကွက်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အထောက်အပံ့ ယူရို ၂၂၁ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက် မည့် ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံများ မြှင့်တင်ရေး စီမံချက်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (Financing Agreement for Enhancing the Education and Skills base in Myanmar) လဲလှယ်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက် ချီးမြှင့်သည်။
အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် ဦးစိုးဝင်း၊ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက် သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည် ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့မှ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များနှင့် အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ၊ ဥရောပ သမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jaroslav Dolecek ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံ အမတ်ကြီး H.E. Mr. John Nielsen ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သံရုံးမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအကြီးအကဲ Dr. Johann Hesse နှင့် စီမံချက်မန်နေဂျာများ၊ Asian Development Bank (ADB) ၊ International Institute for Democracy and Electoral Assistance (I-IDEA) ၊ International Monetary Fund (IMF) ၊ United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) နှင့် GoPA Worldwide Consultant Group တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်ကြ သည်။
အခမ်းအနားတွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt တို့က ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံများ မြှင့်တင်ရေး စီမံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းပြောကြားကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ရှေ့မှောက်၌ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်နှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt တို့က ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံများ မြှင့်တင်ရေး စီမံချက်နှင့် စပ်လျဉ်း သည့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်ကို အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြ သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာ ကြသူများနှင့် အတူ မှတ်တမ်း တင်ဓာတ်ပုံရိုက် သည်။
အဆိုပါငွေကြေးအထောက်အပံ့ ယူရို ၂၂၁ သန်းတွင် ဘတ်ဂျက် အထောက်အပံ့ ယူရို ၁၇၅ သန်းနှင့် ဖြည့်စွက် အထောက်အပံ့ ယူရို ၄၆ သန်း ပါဝင်ကြောင်း သိရပြီး အခြေခံပညာ၊ အလယ်တန်းနှင့် အထက် တန်းပညာရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုနှင့် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာ ကဏ္ဍပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်ရုံနှင့် ကျောင်းသား အဆောင်များ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဆရာ လမ်းညွှန်များ၊ ကျောင်းသုံး ပုံနှိပ်စာအုပ်များ ရိုက်နှိပ်ခြင်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ အရည် အသွေးပြည့် ဝရေး အတွက် သင်တန်းများ ပေးခြင်းနှင့် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ စီမံခန့် ခွဲရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု (PFM Reform) လုပ်ငန်းများကို ADB ၊ World Bank ၊ I-IDEA တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မေလ ၂၈ရက် ၂၀၁၉
မေလ ၂၇ရက် ၂၀၁၉